The Queen မှ ​ကျေးဇူးတုံ့ပြန်​​သော အားဖြင့်​ ချစ်​ရ​သော မိတ်​​ဟောင်း Customer များအတွက်​ သီးသန့်​ Promotion - Amazing Yangon
Home /Featured, Promotion/The Queen မှ ​ကျေးဇူးတုံ့ပြန်​​သော အားဖြင့်​ ချစ်​ရ​သော မိတ်​​ဟောင်း Customer များအတွက်​ သီးသန့်​ Promotion
? October တလလုံး မည်​သည့်​ Treatment ကို မဆို ဝယ်​ယူသူတိုင်းအတွက်​ ? Additional 50% Gift Card ?
လက်​​ဆောင်​ ​ပေး​နေပြီဖြစ်​​ကြောင်း သတင်း​ကောင်းပါးလိုက်​ပါတယ်​​ ???
လှပသောနေ့သစ်များအတွက် The Queen ?
? Open Daily 10:00 AM – 7:00 PM
☎ booking ယူရန်
☎ 09251009292, 09795324274
F-46, First Floor, Building B,
Pearl Condo, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Tsp, Yangon